रेबिज रोग के हो ? यस्ता छन् रेबिज रोगबारे जान्नैपर्ने कुराहरु - ज्ञानविज्ञान
रेबिज प्राणघातक सरुवा रोग हो । यो रोग बहुला कुकुर वा अन्य शङ्कास्पद जनावरको टोकइपछि मानिसमा सर्ने गर्छ । त्यस कारण यस रोगलाई जुनोटिक रोग पनि भनिन्छ । रेबिज रोग कुनै पनि प्रकारका उष्ण रगत युक्त प्राणीहरुमा यो रोग लाग्न सक्दछ । यो रोग चिकित्सा विज्ञानको धेरै पुरानो रोग भएको र हाल यस रोग चुनौतीका रूपमा रहेको पाइन्छ । यो रोगबाट विश्वमा बर्सेनि ५५ हजार मानिस तथा दक्षिण एसियामा ३० हजार तथा नेपालमा बर्सेनि १०० जनाको मृत्यु हुने गरेको अनुमान छ ।
नेपालमा यो रोग प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको छ । यो रोग मुख्यतः बहुला कुकुर वा शङ्कास्पद जनावर वा जङ्गली जनावर खास गरी (स्याल, न्याउरीमुसा, फ्याउरो, चितुवा) आदि जनावरको टोकाइपछि समयमा उपचार नगरेको कारणबाट सर्ने गर्छ । यो रोगमा बिरामीलाई प्यास लाग्छ तर घाँटीमा स्नायु नसाको पक्षघातले गर्दा पानी निल्न सक्दैन । मुखमा पानी पार्न साथ डराउने हुन्छ । बहुला जनावरले टोकेपछि त्यसको विषाणु घाउको माध्यमबाट स्नायु नसा, सुषम्ना हुँर्दै मस्तिष्कमा पुगेर बुद्धि विकास भएपछि रेबिज देखापर्छ ।
—शङ्कास्पद कुकुर, जनावर वा बहुला कुकुरले टोक्नासाथ तुरुन्तै साबुन पानी, सम्भव भए मनतातो पानी र साबुनले वा सम्भव भए धाराको फोर्सले बगिरहने पानी यदि त्यो पनि सम्भव नभएको खण्डमा मगमा पानी राखेर फोर्सले साबुन पानीले तुरुन्तै धुनुपर्छ । डिटोल वा अन्य एन्टिसेप्टी झोल पदार्थ लगाउनुपर्छ ।
रगत बग्ने गरी घाउ भएमा वा खरोच भएमा २४ घण्टाभित्रमा टिटनस को सुई पनि लिनुर्छ । यसो गर्दा रेबिजका बिषाणुहरु शरीरभित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्न सकिन्छ । घाउ पाक्ने सम्भावना भएमा एन्टिबायोटिक औषधि दिनुपर्छ । यसरी उपचार गरेमा रेबिज लाग्नबाट बच्न सकिन्छ ।
रेबिज रोगबारे जान्नै पर्ने केही कुरा
रेबिज रोग पशुबाट मानिसमा सर्ने रोग हो । चरा र स्तनधारी प्राणीहरुमा मात्र असर गर्ने यो रोग जंगली जनाबरहरु जस्तै स्याल ब्वाँसो, फ्याउरो आदि जनाबरहरुमा उत्पन्न हुन्छ । घरपालुवा पशु भनिने कुकुरमा प्राय यो रोग तीनै जंगली जनाबरबाट सर्ने गर्छ र मानिसमा यो रोग सार्ने मुख्य माध्यम त्यहि घरपालुवा भनिने जनाबर कुकुर हो । कुकुरको टोकाईबाटै मानिसमा यो रोग सर्छ भन्दा हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डव्लुएचओले विश्वभर रेबिजबाट मर्नेको संख्या बार्षिक करीब ५५ हजार रहेको जनाएको छ । तर नेपालमा यो रोगबाट बर्षेनी कतिको ज्यान जान्छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन् । तर रेबिज रोग लाग्नुको करीब ८० प्रतिशत बढी माध्यम कुकुरकै टोकाई भएको अनुमान छ । ३ देखी ५ प्रतिशतलाई जंगली जनावरले टोकेको अनुमान छ ।
रेबिज खोपका अन्वेशक फ्रान्सिस बैज्ञानिक लुईस पास्चरले मृत्युबरण गरेको आजकै दिन अर्थात २८ सेप्टेम्बरलाई सम्झँदै विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको हो ।
यसबर्षको रेबिज विरुद्धको दिवसको नारा ‘जनचेतना, खोप र उन्मुलन’ भन्ने रहेको छ । तपाईँ हामीले पनि आफूले पालेको जनावर विशेषगरी कुकुरलाई समयमै रेबिज विरुद्धको खोप लगाइदिन जरुरी छ । यदि लगाइसकेको भए पनि अन्य संक्रमित जनावरहरुसंग उनीहरुको सम्पर्क र संसर्ग नहोस भन्ने कुरामा विशेष सचेत हुन आवश्यक छ । किनकी यो संक्रमणको जोखिममा हामी जो कोही पनि जुनसुकै बेला पर्न सक्छौँ ।
रेबिजको लक्षण कति दिनमा देखिन्छ ?
कुकुरले टोक्ने वित्तिकै अर्थात आजको आजै रेबिजको लक्षण देखिदैन । अर्थात जनावरले टोकेको केही महिना वा बर्ष पनि लाग्न सक्छ । बरु महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जनावर अर्थात कुकुरले कुन ठाँउमा टोकेको छ ? कति ठाँउमा टोकेको छ ? लुगामाथिबाट टोकेको छ कि नांगो छालामा टोकेको छ ? कुकुर कस्तो खालको छ? आदि कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । यी माथिका आधारमा उपचार प्रक्रिया समेत परिवर्तन हुन्छ ।
रेबिज कुकुरबाट मानिसमा मात्रै सर्छ ?
रेबिज मानिसलाई मात्रै होइन गाई, भैँसी , भेँडा बाख्रा, घोडा, गधा, सुँगुर, बंगुर र बिरालोमा पनि रेबिज लाग्न सक्छ । रेबिज रोग लागेको कुनै पनि जंगली जनाबरहरुसंगको सम्पर्कमा आउँदा सजिलोसंग कुकुरमा सर्दछ । रेबिज रोग लागेको कुकुरको टोकाई तथा चटाईबाट सर्ने यो रोग सबै पशु तथा मान्छेहरुलाई सर्न सक्छ ।
रेबिज रोग लागेपछि के हुन्छ ?
तत्काल यसको केही लक्षण देखिदैन तर समयमै उपचार भएन भने यसले मानसिक रुपमै असर पार्छ । अर्थात मानिस बहुलाउने हुन्छ । त्यस्तै रेबिज रोग लागेको मानिस पानीबाट डराउँछ । रेबिज रोगको असर मस्तिस्कमा पर्ने भएकोले संक्रमित व्यक्ति चिच्याउने, अरु मानिसहरुलाई चिथोर्ने , कोपर्ने जस्ता काम गर्छ ।
रोगको तीन अवस्था अनुसार लक्षण देखा पर्छन्
पहिलो अवस्था : टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, घाँटी, जीउ दुख्ने हुन्छ । भने विरामी साना तिना कुरामा पनि उत्तेजित हुने गर्दछन् ।
दोस्रो अवस्था : चिडचिडाहट हुने, अध्यारो सुनसान कोठामा एक्लै बस्न रुचाउने , जो संग र जे गर्दा पनि रिसाउने, पानीसंग खेल्न मात्रै होइन पानी हेर्नै डराउने, श्वास प्रश्वासमा कठिनाई हुने हुनाले तिर्खा लोपनि विरामीले पानी खान सक्दैन ।
तेस्रो अवस्था : रयाल चुहाउने , अरुलाई टोक्न खोज्ने, विस्तारै हातगोडा नचल्ने हुँदै मृत्युसमेत हुन्छ ।
रेविजरोगको असर मस्तिकमा पर्छ । यदि रेबिज रोग लागेको मानिसको समयमा उपचार भएन भने उसको मृत्युसम्म हुने खतरा हुन्छ ।
रेबिजको खोप निशुल्क उपलव्ध छ :
रेबिज विरुद्धको यो खोप सरकारले नेपाली जनतालाई निशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउदै आएको छ । कुकुर स्याल फ्याउरो जस्ता शंकास्पद जनावरले टोकेमा तत्काल सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पुगी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसंग परामर्स लिनुपर्छ । र आवश्यकता अनुसार खोप लगाउनुपर्छ । यो खोप बढी जसोलाई पाँच डोज दिने गरिएको छ । कसै कसैलाई सात डोज समेत दिइन्छ । तर खोपको पैसा लाग्दैन ।
Up Next के तपाईको बारम्बार सिँगान बग्ने गर्छ ? सावधान ! बेवास्ता गरे मुटुका लागि खतरा हुन्छ